Global Voices teny Malagasy » Polonina: 10 aprily 2010 Sabotsy mainty, Andro fisaonana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Avrily 2010 10:24 GMT 1	 · Mpanoratra Sylwia Presley Nandika Candy
Sokajy: Polonina, Rosia, Fitantanam-pitondrana, Politika
Labozia tany Varsovie, sary nalain’i Maria Seidel
Satria isika mbola mamakivaky tanteraka ao anatin’ny 24 ora voalohany amin'ny fangirifirian’ny firenena Poloney , maneho hevitra mikasika ny zava-nitranga io maraina io ireo fampahalalam-baovao ara-sosialy isan-karazany, raha namoy ny Filoham-pireneny sy olo-manan-kaja hafa miisa 95 i Polona.
Ao amin'ny Facebook, maro ireo olona no nirohotra anatin'ireo vondrona vao noforonina:
[*] ho an'ireo Poloney maty tany akaikin'i Smoleńsk androany.
Iray isika ao anatin'ny voina manjo
10.04.2010, Sabotsy mainty ho fialantsasatry ny fanahin'izy ireo
Maro no mbola mitolona  amin'ny fanekena ny zava-mitranga:
Ny hafa manoritra  ny lanjan'ny fahatsiarovana ny zava-doza niseho androany sy ny toerana nitrangan'izany:
Be ny mampivoitra  ny rabiraby ratsy momba ity loza ity:
Nisidina mba hanatrika ny fahatsiarovana ireo maty tao Katyń ry zareo kanefa dia namoy ny ainy ihany koa…
Nanoloana ny Lapan'ny Filoham-pirenena, Warsaw, sary avy amin'i Maria Seidel
Ilay vohikala ara-tsosialy ‘Nasza-Klasa’ koa dia namoaka lahatsoratra maro maneho ny fiaraha-miory amin’ny fianakaviana, ny alahelo ny tanindrazana sy ny fomba fijery vaovao ny firaisankina manodidina ny maha-filoha ny filoha ho an’ny firenena manontolo :
Fony fahavelony dia nanohana azy ny sasany, ny hafa nanohitra azy. Ny voina kosa dia namerina ny rehetra hitodika aminy indray! Mampalahelo raha amin'izao fotoana vao nofinidy ho filoha izy nefa fahavelony dia fahazarantsika ny miresaka n y momba azy amin'izao vosibosi-dratsy rehetra izao… ankihitriny dia alahelo sy tomany no sisa satria lasa ny Filohantsika sy ireo olona maro niaraka taminy koa. Mampalahelo sy mankarary saina ny hoe amin'izao fotoana izy vao nanehoam-pitiavana(*) Miombon'alahelo tanteraka amin'ny fianakviany sy ireo rehetra izay tena tohiny anaty amin'izy ity !!!!
A ankizivavy kely skoto ao Varsovie, sary avy amin'i Maria Seidel
Mandram-piandry ny fanambaràna ofisialy, tany anatin'ireo forums sy fanamarihana maro tan-gazety, nanomboka niresaka izay mety ho antony niteraka ny loza ny olona. Roled dia mitanisa  ny sasantsasany izay mivoitra kokoa:
1. Misidina anaty fakon-javatra efa antitra be ianao, izay na ireo mpanamory aza efa sahirana mikirakira azy.
2. Misidina anaty fakon-javatra efa antitra be ianao ary amin'ny toetr'andro ratsy, tsy ahità-mitsinjo.
3. Dia manapa-kevitra ianao fa hametraka io fakon-javatra antitra be io amina seranana iray izay tsy natao velively ho amin'ny toetr'andro ratsy toy izany.
4. Olona 80 mahery no miaraka aminao, ary olona manana ny maha-izy azy daholo.
5. Zavatra efa iarahan'ny rehetra mahalala fa misy olona efa manana tantara amin'ny fanerena ny mpanamory tsy “saro-tahotra” [manao sarinteny amin'ny fangatahana nataon'ny filoha tany aloha tany mba hipetrahana ihany na dia ratsy sy tsy feno aza ny fepetra]
Vokany, ho an'izay mahay mandinika tsara, dia izao iaraha-mahita izao.
Wujek_extrema dia mieritreritra  fa[PL]:
Indrisy, tena resy lahatra aho fa tena navesatra ny tsindry nahazo ireo mpanamory. Toy ny henoko mihitsy aza ny iray amin-dry zareo manao hoe : “ Tsy avelantsika ho ny Rosiana mihitsy no hiteny amintsika izay tokony hataontsika” – indrindra indrindra fa eny an-dàlana ho any Katyń. Henatra be ho antsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io rha vao mivoaka ami'ny fomba ofisialy.
nych mametraka  ny mety ho fandraisan'anjaran'ny Filoha [PL]:
Raha niteny tamin-dry zareo ny Rosiana ny amin'ny tsy tokony mbola hipetrahana, tena azoko antoka fa nandray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'izay i Kaczor [Filoha], tsy mety aminy ny ho tara amin'ny fotoam-pankalazana.
Navoitran'i  xyz ny antony mavesatra ao ambadiky ny fandraisana fanapahan-kevitra toy io [PL]:
Nisy mpanamory ela nietezana sy jeneraly maro tao anaty sidina tao. Tsy maintsy ho nahazo an-tsaina ny loza mitatao amin'ny fametrahana ny karazana fiamanidina toy itony amin'ny andro ratsy toy izao ry zareo. Mety ho toy izany koa ireo olona maro naka hevitra ny mba hiovana seranam-piaramanidina sy mba hanisahana/na tsy hahatanteraka ny fotoam-pankalazana ary angamba afahoatra loatra ny fahasahian'izy ireo – tsy misy hahalala velively ny marina isika.
pfg dia manontany  ny momba ny teo-tsaina tsy tompon'andraikitra nandefa manampahefana maro ho anaty fiaramanidina tokana toy izao[PL]:
Azo sainina ihany ny hoe niaraka fiaramanidina ny Filoha, ny Praiminisitra, ary ireo minisitrany, ny jeneraly Gągor sy ireo manampahefana sasany. Saingy ny lohandohan'ny tafika rehetra ho anaty fiaramanidina tokana – tena tsy azo inoana.
Raha mbola teo ampioandrasana valiny tamin'ireny fanontaniana irny isika, ireo mpikirakira ny Wykop dia nifantoka  [PL] tamin'ny hoe izao tontolo izao dia mianatra ny zava-marina momba ny vonomoka tao Katyń. Manoratra i  Hemus [PL]:
@JamesikR Na eo aza ny loza amin'ny endriny rehetra, marina ny anareo. Na dia mizarazara be aza ny fahatsapako izao, heveriko fa ny loza nitranga androany dia hanokatra ny mason'ny Tandrefana ary tsy handre itsony isika amin'ireo fanambarana amin'ny hoavy momba ny “Camps de concentration tany Polona.” Ny fahafatesan'ireto olona ampolony ireto dia tsy hanamaloka akory ny fahafatesan'ireo an'arivony maro.
Mczarny dia manohy amin'ny filazana  ao amin'ny faritra natokana hametrahana fanamarihana avy amin'ny mpikirakira izay manambara fa ny fidanganan'ny tahan'ny fikarohana any amin'ireo lohamilina dia nateraky ny kizin'ny olona momba ilay loza fotsiny ihany:
Isaorana Andriamanitra amin'ny kirin'ny olombelona. Alefako lavidavitra kokoa aza hoe ny loza androany dia tsy ho very momoka sy hampiseho ny anton'adin'ny sasany – ny tadidy. Indrisy, ry zareo no nandoa ny vidiny lafo indrindra.
Zexon dia mitondra fanamarihana [PL] anaty hafatra miabo iray, ilazany fa mitarika ho amina fifandraisana tsaratsara kokoa eo amin'ny Polona sy Rosia iny:
Ary dia hisy angamba ny fihatsaran'ny fifandraisana Poloney-Rosiana.
Midina amin'ny antsasany (misaona) daholo ny sainam-pirenena, sary avy amin'i Maria Seidel
Ny blox.pl, sehatra mpampiantrano blaogy , ho setrin'ny fihazakazaky ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo blaogy maro, dia nangataka  [PL] an'ireo mpamaky mba hampivondrona ny lahatsoratr'izy ireo ao anatin'ny faritra fametrahana fanamarihana. Mpitoraka blaogy maro, toa an'i Grzegorz Ajdukiewicz, dia mizara  [PL] ny fitantaran-dry zareo momba ilay andro, arahan-tsary:
Tena nanimba tanteraka ny androko ity loza tsy roa aman-tany ity. Natomboko tamin'ny fanhdehanana nanatrika ny hetsika Photo Day ( efa ny andiany faha-8) izy ity. Tao anatin'ny faritra voahidy nopho ny asa fanavaozana ny Central Station no nifamory ireo mpanao gazety amplony teo ho eo. Teo anilako no namindra no sady miantsy an-telefôna ny iray tamin-dry zareo. Henoko ny hoe “Filoha,” “maty daholo?” sns. Noheveriko ho sangy ratsy ilay izy ( milaza zavatra eny anivon'ny maro mba hanapariahana tsaho). Nandeha nivoaka ilay faritra masiso fandehanana ambanin'ny tany aho ary niditra tamina toeram-pisotroana iray an-dàlam-pikatonana, izay tena nahazendana ahy tokoa fa nanana TV LCD iray ry zareo. Nandeha ilay izy, olona vitsivitsy no mijery any sy mitanatana vava. Tamin'ny 9:56 maraina. Miha-mazava ny zavatra rehetra. Tsy vazivazy ity! Indrisy!
Ny hafa, toa an'i yesss, dia namela ny lahatrorany  ho faran'izay fohy [PL]:
Miantrà an'ireo olona ireo, ho an'ireo olona ireo ny fitserako. Tsy ijerena loko na firehana. Tena milonjitr'alahelo.
Bronisław Komorowski, izay napetraka hitondra vonjimaika ny firenena mandra-pisin'ny fifidianana manaraka, nandritra ny kabary ofisialiny  [PL] dia nankahery ireo Poloney noho ny alahelon-dry zareo tamin'ity andro ity:
Androany, ao anatin'ny taratry ny loza nihatra tamin'ny firenentsika, miray hina isika. Androany tsy misy elatra havia, na elatra havanana. Tsy misy dikany ny tsy fitsitokotokoana ara-kevitra sy finoana. Androany tokana isika, mijoro manolona any loza lehibe mihatra, eo imason'ny fahafatesan'ireo olona maro. Miombona amin'ny alahelon'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy isika ary amin'ny ahiahin'ny Tanindrazana nilaozan'izy ireo.
Fisaorana manokana ho an'i Maria Seidel  noho ny tolotra sary avy any Varsovie.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/04/17/5696/
 fangirifirian’ny firenena Poloney: https://globalvoicesonline.org/2010/04/10/poland-president-kaczynski-is-killed-in-plane-crash-in-russia-initial-reactions/
 dia mitanisa: http://forum.gazeta.pl/forum/w,1157,109860265,109860265,Przyczyny_sa_oczywiste.html
 dia mieritreritra: http://forum.gazeta.pl/forum/w,1157,109860265,109887781,Re_Przyczyny_sa_oczywiste.html
 dia manontany: http://forum.gazeta.pl/forum/w,1157,109858823,109862257,Re_Dlaczego_oni_wszyscy_wsiedli_razem_do_jednego.html
 dia nifantoka: http://www.wykop.pl/link/344474/jedna-pozytywna-rzecz-w-tym-wszystkim/
 dia mizara: http://niechciane.blox.pl/html
 dia namela ny lahatrorany: http://am2good4u.blox.pl/2010/04/zal.html
 nandritra ny kabary ofisialiny: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,7756188,Komorowski__Dzisiaj_w_obliczu_narodowego_dramatu_jestesmy.html
 Maria Seidel: https://globalvoicesonline.org/author/joria/